काेराेना खाेप निर्यातमा भारतले राेक लगायाे,अहिलेसम्म पर्खेकाे नेपालकाे विकल्प के हाेला ? « Janasahara
काेराेना खाेप निर्यातमा भारतले राेक लगायाे,अहिलेसम्म पर्खेकाे नेपालकाे विकल्प के हाेला ?
पुस २० काठमाडौं – कोरोना विरुद्धको खोप आयातका लागि तयारी गरेर बसेकाे नेपाललाई कोरोना खोप प्राप्त गर्न कठिन देखिएको छ। आफ्नो देशमा उत्पादित अक्सफोर्ड एस्ट्राजोनको खोप निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपाललाई खोप प्राप्त गर्न कठिन हुने भएको हो।
याे खोप २-८ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिने अक्सफोर्ड एस्ट्राजोनको खोपलाई भारतको सीरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको छ। भण्डारण र आयात गर्न सहज हुने भएको भन्दै नेपाल यहि खाेप खरिद गर्ने प्रक्रियामा थियाे। तर अहिले भारतमा याेे खाेपले मान्यता पाए संगै भारतले निर्यातमा राेक लगाएकाे हाे ।
अहिले भारतमा दाेस्राे प्रकारकाे काेराेना भाइरस भित्रिएको हुदा पहिलेकाे भाइरसबाट पनि संक्रमित अत्यधिक बढदाे क्रममा रहेकाले याे खाेपलाई आपतकालीन रुपमा प्रयाेग गर्न भन्दै निर्यात गर्न नसकिने भारतले बताएको छ। कम्पनीका मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पुनावालाले भारतले पहिले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्न चाहेको र त्यसै कारणले निर्यातको अनुमति नदिएको भन्दै यो निर्णयको सम्मान गरिएको बताएका छन्। अब नेपाले विकल्प खाेज्नु परेकाे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन।
भारतले आफ्नै देशमा बनेको अर्को खोप कोभ्याक्सिनलाई पनि आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। तर यो खोपको प्रभावकारिता बारे भारतमै विभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन्। भारतका विपक्षी दलका नेताहरुले यो खोप क्लिनिकल ट्रायलका क्रममा पनि प्रभावकारी नदेखिएको र सबै चरणका ट्रायलसमेत पार गरिनसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
भारतमा केही समयमै खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने र आगामी जुलाईसम्म ३० करोड जनालाई खोप दिने तयारी गरिएको छ। यसअघि भारतीय अधिकारीहरुले भारतमा खोप लगाउन सुरु हुँदा नेपाललाई आवश्यक पर्ने ३ प्रतिशत खोप उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। तर भारतले प्रभावकारी मानिएको खोप निर्यातमा रोक लगाएपछि कुन खोप दिन्छ भन्नेमा समेत आशंका बढेको छ।